Moshi Otto Q + Vortex 2: Xeedho wirelesska ugu dhaqsiyaha badan | War gadget
Xagaagu hadda waa imminka waana waqtigii laga fakari lahaa fasax aadista, sidaa darteed waxa ugu habboon ayaa ah inaan hubinno inaan haysanno dhammaan qalabkeenna u diyaarsan inaan shandadda gelino. Xirmooyinka xarkaha wireless waxay noqdeen wax soo saar lamahuraan ah marka loo fiiriyo raaxadooda iyo nashqadeynta, waana sababta aan ugu leenahay miiska falanqeynta Moshi's Otto Q, waxa loogu yeero 'xarkaha xarkaha ugu dhaqsaha badan adduunka ee ugu xaragada badan, waxaan sidoo kale ku tuseynaa Vortex 2 cusub, dhagaha dhagaha ee Hi-Fi. Si xiiso leh, iyagu maahan headphones-ka Bluetooth, laakiin halkan ma dooneyno inaan cidna uga tagno.
Sida had iyo jeerba ah, waxaan fursadda u qaataa inaan ku xusuusiyo inaad xagga sare ku haysato fiidiyowga ku jira waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto sanduuqa iyo hawlgalkeeda labadaba sawirro, Marka waad ka faa'iideysan kartaa oo aad iska diiwaangelin kartaa kanaalkayaga YouTube-ka ama aad u fiirsan kartaa waxyaabihii aan hore u soo daabacnay, hubaal waxaad ka heli doontaa wax aad jeceshahay sidaasna waxaad ku caawin kartaa bulshada Actualidad Gadget inay sii socoto koritaankeeda.
1 Moshi Otto Q - Ugu dhaqsaha badan suuqa
2 Moshi Vortex 2 - Dhawaq aaminnimo sare
Moshi Otto Q - Ugu dhaqsaha badan suuqa
Naqshadeynta Otto Q waa wax iska caadi ah, waxaan ka hadleynaa Qi-xiraha wareega ee caadiga ah, oo lagu dhisay balaastikada loo yaqaan 'chassis', dharka qaybta sare iyo goob yar oo silikoon ah oo aan simbiriirixan karin taas oo ka dhigaysa moobiilkeenna inuu si fiican ugu xirnaado, wax tilmaamaysaa tayada degdegga ah. Dhinaca hore waxaan ku leenahay Laydh tilmaamaya xaaladda amarka, iyo sidoo kale xagga dambe waxaan leenahay dekedda USB-C taas oo aan ku xiri karno xeedho korontada, taas oo aan ka faa'iideysaneyno fursad aan ku faallono, laguma darin xirmada. Waa muhiim in la xuso, maadaama laga faa'iideysanayo "xawaareheeda" waa inaan ku darnaa adabtarada taageerta awoodda lacag-bixinta ee Otto Q ay awood u leedahay inay bixiso.
Iibso Moshi Otto Q qiimaha ugu fiican ee LINKAN
Majaladda Mac & I ee tijaabooyinkeeda waxay ku caddeysay inuu yahay xeedho ugu dhaqsaha badan adduunka, waa xeedho leh qiyaasta Qi iyo awood rar ilaa 10W. Dhismaheeda wanaagsan waxay ka hortageysaa kuleylka waxayna ka dhigeysaa mid culeyskiisu yahay heerarka lagu sharraxay. Waxaan ku qaadnay tijaabooyinka Huawei P40 Pro iyo iPhone X, oo ku xirey Otto Q xeedho 30W, helitaanka natiijooyinka la cayimay. Xeedho Moshi waxay ku habboon tahay labada taleefannada casriga ah iyo sameecadaha caadiga ah ee TWS Qaabka Huawei FreeBuds 3, oo hawlgalkiisa aan ku xaqiijinay kaamil ahaanta. Wax alaab ah lama helin.»/]
Dhinaceeda, waxay leedahay ogaanshaha walxaha ajaanibta ah ee faragalin kara amarka qalabka iyo dammaanad qaadka amniga. Sidaan soo sheegnayba, mahadsanidiin nidaamkeeda shatiga Dib u laabo C waxaan heysanaa awoodda ugu badan ee 10W iyadoo aan kululeyn, tani waxay sidoo kale naga caawineysaa inaan lacag ka qaadno aaladdayada annaga oo aan ka saarin kiiska, waana in lacagta la dhammeynayo xitaa gacmo adag ilaa 5mm qaro weyn, wax dhibaato ah kamaanan helin kiisaska rasmiga ah ee Apple iyo Huawei. Kuleylka kuleylka ah ayaa ka dhigaya 10W amarka korontada mid deggan, tani waa faa iidadeeda markay timaado noqoshada xeedho runtii dhakhso badan.
Iibso Moshi Otto Q ee Macníficos (LINK)
Moshi Vortex 2 - Dhawaq aaminnimo sare
Waa dhif in laga hadlo samaacadaha dhagaha leh ee maanta iyo da, dib u eegista ugu dambeysay ee dhawaqa ah ee aan sameynay dhamaantood waxay ku wajahan yihiin astaamaha wireless-ka noocyadooda kala duwan. Ku noqo miiskayaga dib-u-eegista oo ah 3,5mm Jack oo sameecadaha dhegaha leh si aad u aragto haddii uurjiifka adeegsadayaasha qaarkood ee codka tayada sare leh ee ka imanaya xargaha analoogga uu run ahaantii xaq yahay. Sameecadaha dhagaha la 'waxay ka soo baxaan' premium 'isla marka ay sanduuqa ka soo baxaan.
Waxay ka samaysan yihiin gebi ahaanba bir, sida uu sheegayo Moshi waxay sidaa u yeelaan si looga fogaado gariirka inta ugu badan ee suurtogalka ah waxayna markaa bixiyaan dhawaq aaminnimo sare leh oo aan nijaasayn. Sidaa awgeed tijaabooyinkeenna waxaan ku helnay baass xoogaa la xoojiyay, aragti ahaan mahadnaqidda sare ee darawallada neodymium ee leh baaxad ballaaran (10Hz-20kHz / -10dB @ 1kHz). Meelaha dhaadheer sidoo kale way cad yihiin, xaqiiqada isticmaalka ficil ahaana waa in si wanaagsan loo maqlo dhammaan cabbirka kala duwan ee aan awoodnay inaan tijaabinno.
Dhiifasho: 16 ohm
Dareenka: 103 db
XR8 Wadayaasha Neodymium
Waxaa ka mid ah: 3 nooc oo ah silsilado dhegta dhegaha, 1 go'an oo ah xusuusta suufka dhegaha
Iibso Otto Q at MACNIFICOS
Bar go'an ayaa sidoo kale ah go'doominta. Waxaan diiradda saareynaa "pads" silicone, waxay leeyihiin qayb yar oo silikoon adag ah, Tusaale ahaan AirPods Pro, oo loogu talagalay in si fudud loogu dhejiyo dhegta oo markaa abuurto nooc saameyn madhan ah oo naga fogeyn doona bannaanka. Natiijadu waa mid aad u fiican, maadaama aan nahay dhagaha wax lagu dhejiyo waxaan ku aragnaa daboolida banaanka inay adagtahay in laga helo alaabooyin kale oo la mid ah Waxaan sidoo kale leenahay suufka xumbada xusuusta oo aan kugula talinayo wax badan tusaale ahaan cayaaraha. Kastoo suufka aad isticmaasho, baaritaankayaga waxaan ku ogaanay inaysan si joogto ah u dhicin.
Ugu dambeyntiina waxaan haysannaa buro kontorool oo noo oggolaan doonta inaan la falgalno waxyaabaha ku jira maaddooyinka kala duwan iyo sidoo kale ka jawaab celinta iyo ka jawaabidda wicitaannada mahadnaqa makarafoonkeeda. Dhibic lagu muujiyo badeecadahan badankood waa tayada makarafoonka, fiidiyowkeena waxaad ku arki kartaa sida ay u qabato codka si cad oo qeexan, marka ka jawaabida wicitaanada ma noqoneyso dhibaato, maqnaansho la'aanta sida ay ugu dhaqanto jawiga buuqa badan. .
Hal taabasho: Hakad / Ciyaar
Laba taabasho: Heesta xigta
Saxaafad dheer: U yeer Siri / Kaaliyaha Google
Dhanka Moshi's Otto Q, waxaan kaheleynaa Qi xeedho xayeysiis heer sare ah oo leh waxqabad heer sare ah. Shakhsiyan, waxaan ka mid ahay kuwa aan kugula talinayn inaad aado warshadleyda aan lagaranayn hadii aan kahadalno xirayaasha fiilooyinka, maxaa yeelay waxaan dhibaato u gaysan karnaa batteriga iyadoon la helin ilaalin wanaagsan. Otto Q wuxuu balan qaadayaa oo uu buuxinayaa astaamahiisa, iyadoo lagu qiimeynayo waxa laga fahmi karo suuqa ee xeedho tayo sare leh, shaki la'aan waa alaab lagu taliyay oo aad ka iibsan karto 45 Yuro on Amazon (LINK).
Wixii ku saabsan sameecadaha dhagaha ee Vortex 2, waxaan leenahay nidaam fiilooyin ah oo kugu xaddidaya dhinacyo badan, laakiin loo dejinayo qiimo ahaan iyo bedel xiiso leh kuwa raadinaya dhawaq tayo sare leh oo doonaya inay ku xirnaadaan 3,5mm Jack. Waxaad ka iibsan kartaa 65 euro oo ku yaal degelkooda
Kireynta tayada iyo awooda
Dhignaashada iyo qaboojinta
Waxaa ka mid noqon kara adabtarada shabakadda
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Moshi Otto Q + Vortex 2: Xeedho Xawli Dheereeya
Aorus 5, Gigabyte ee laptop-ka heerka gelitaanka ciyaarta [Dib u eegis]